Egwuregwu kaadị, kaadị Tarot, kaadị Oracle - Wangjing
Kaadị eji egwu egwu
Kaadị eji egwuri egwu
Kaadị Edere Edere
Kaadị Flash Mmụta
Ngwa ndị ọzọ Kaadị
Ike Nka na ụzụ
Ewu Ewu Okwu Tarot…
Kaadị Tarot Ọ nwere ike nyocha, ịkọ ma nye ndụmọdụ maka mkpa dị iche iche dịka ịhụnanya, mmekọrịta dị n'etiti na ...
Silver Edging Rider Tarot Card Deck WJPCC nwere obi ụtọ na emepụtara ọtụtụ kaadị mkpọchi a ma ama. Ọtụtụ ndị na-ese ihe na-ahọrọ 350g…
Egwuregwu Ewu E Biputara Ahịa ...
Egwuregwu kaadị dị mma maka ọfịs, ọpụpụ, njem ụgbọ ala na eserese, enweghị oke edobere maka egwuregwu egwuregwu kaadị na ọtụtụ nke…
Kaadị Egwuregwu Mgbasa Ozi
A na-akpọ poker Advertising, a na-akpọkwa poker mgbasa ozi, pokerịs onyinye, poker igbega. Ọ na-ejigide nọmba nkuku na co ...
Akwụkwọ edemede ahaziri iche ...
Otu esi eme kaadi egwu kaadị egwu egwu dị egwu? WJPCC maara ọtụtụ ihe. Anyị na-eme naanị kaadi kristal dị elu na-egwu c ...
Mezue kaadị nke onwe gi jiri ngwa anyi n’eme ya ka okacha ahia ma obu ahia ndi ozo. Ọ ga ...
Usoro nhazi ọkwa
Egwuregwu ịkụ kaadị
Egwuregwu Kaadị e biri ebi
Mgbaaka Mirage nke kaadị egwuregwu
Keywords: WJPC, WJPCC, kaadị ịgba egwu, kaadị kaadi, kaadị, kaadị ịgba egwu kaadị, kaadị anwansi, ndị anwansi, imecha bọl, mkpuchi $ 19,017! Enwetara nnukwu ihe ịga nke ọma na Kickstarter ọzọ, Mirage Deck nke kaadị egwuregwu, oche nke WJPC bipụtara. WJPC abụrụla onye na - eweta ndị ahịa f ...
Ajụjụ: Enwere m ike ịnweta ụfọdụ nlele iji nwalee ma ọ bụ mee nyocha nke m?
A: N'ezie ị nwere ike. Anyị nwere nhọrọ atọ maka nlele. 1. reedị nlele nke kaadị kaadị anyị gara aga dị, naanị ị ga-akwụ ụgwọ mbupu. Ihe onyonyo nke 2.Digital: mpempe akwụkwọ na-esighi na artwork gị gụnyere igbe ihu, azụ na igbe mkpọchi, a pụrụ iji akara agba dijitalụ na-ebi akwụkwọ bido ihe dị ka 70% -80%. 3. Nnyocha nkịtị (ihe nlele anụ ahụ). Yiri ngwaahịa, agba agba nwere ike dakọtara na ụcha ngwaahịa ihe dị ka 90-95%
You na-ebufe / zuga ụwa?
Ih! Anyị na-ebufe ebe niile gburugburu ụwa. Anyị na-enye DHL, Fedex, UPS, ụgbọ mmiri na ụgbọ mmiri, mee ka anyị mata adreesị mbupu gị ka anyị nwee ike lelee ego maka gị.
Kedu ihe MOQ gị? Enwere m ike ịme kaadị n'okpuru MOQ gị?
Anyị MOQ bụ 500 deki maka otu version.Yes, anyị nwere ike ịme kaadị n'okpuru 500 decks dị ka achọrọ, mana ngụkọta ọnụ bụ otu 500 dcks, nke na-eme ọdụ ụgbọ ala ọ bụla dị oke ọnụ ma ọ bụ ya mere anyị ji akwado ike gị ịtụ 500.